Ogaden News Agency (ONA) – Doolaal oo ka codsaday dawladda Hargaysa inay joojiyaan xidhiidhka ay la leeyihiin ONLF.
Doolaal oo ka codsaday dawladda Hargaysa inay joojiyaan xidhiidhka ay la leeyihiin ONLF.
Posted by ONA Admin	/ May 4, 2014
Waxaa la sheegaa inuu Imaamka weyn ee Abi Xaniifa RC isagoo amin fajarka dabadii darsin u akhrinaya ardayadiisii uu soo hor-fadhiistay nin oday ah oo haybad aqooneed ay ka muuqato oo leh gadh cad. Lugaha ayaa u fidsanaa Imaamka suu u jimicsado. Markuu ninkii soo fadhiistay ayuu Imaamka laabtay lugaha ixtiraam ahaan. Ninkii ayaa xoogaa ka dib weydiiyay Imaamka su’aal oo yidhi; Goorma ayuu qofka Soonka xidhanayaa? Imaamkii ayaa yidhi; Marka uu fajarka dilaaco? Ninkii ayaa isagoo isleh xojee Imaamka yidhi; Ka waran haduu Fajarka Dilaaco Habeen badhka, muxuu samayn? Imaamkii ayaa intuu lugihiisii dib u fidsaday yidhi; Hadda ayuu Abii xaniifa lugaha Fidsan karaa آن لابي حنيفة ان يمد رجليه.. Waxayna maahmaah u noqotay marka qof haybad leh ood ka filaysay aqoon iyo daganaansho uu ka wareego wax ka hooseeya sidaad ka filaysay.
Waxaa hubaal ah qofka dhagaysta Wareysiga Doolaal Aadan Dhagoole uu siiyay HclTV (Horn Cable TV), inuu lugaha kali ah aanu fidsanaynine uu candhuuf wajiga kaga tufi.
Waxaan inbadan isweydiiyay markaan xoogaa ka dhagaystay wareysigaa, waxa ku kalifi kara shaqsigan ahaan jiray Saraakiishii Sare ee ciidankii Somaliya inuu Hargaysa intuu yimaado uu ka codsado maamulka halkaa ka jira inaysan kusoo daynin oo xadkooda u fisixin inay ka soo galaan Nabad-diidka siduu hadalka u yidhi. Hadalkaa qofka dhagaysta, iyo siduu isleeyahay ee codsigiisaa uu ugu soo celcelinayo wuxuu is-odhan ma heshiis ka dhexeeya ONLF iyo maamulka SomaliLand ayaa jira oo Itobiya ay usoo dirtay Doolaal inuu kala hadlo maamulka SL oo ka codsado inay arintaa dib uga noqdaan? Ma filayo inuu jiro qof Somali ah oo aaminsan heshiis noocaa ah inuu ka dhexeeyo ONLF iyo maamulada Somaliya.
Arinta kalee aadka iiga fajicisay intaanan iska daminin wareysiga waxay ahayd siduu ugu ololeyanayo kala qaybinta Somaliya iyo inay ka hirgasho barnaamijka ay wadato Itobiya ee ah in Somaliya ay u qaybiso waxay ugu yeedhaan maamulo kala madax banaan oo midwalba ay Itobiya maamusho. Wuxuu isagoo isawrejiinaya kusoo celcelinayaa siduu hadalka u dhigayay inuu doonayo hadaan nahay buu yidhi Somalida Itobiya in nalugu ixtiraamo, sidoo kalena maamul walba sidiisa loo aqoonsado hadday tahay SL ama PL ama JL ama KL ama .. waxaa intaaba ka yaab badnayd, siduu u amaanayo kooxda TPLF ee xukunka qabsatay isagoo ku sheegay inay ka dhigeen Somalida Itobiya aragtidiisa shacab xor ah oo ka madaxbanaan Itobiyadii Minigisto iyo xayle Salaase. Doolaal oo ka mid ahaa baarlamaankii u codeeyay 1992gii in afti laga qaado shacabka Somalida Ogadenya oo kusoo baxsaday dhar dumar markaad aragto inuu sidaa u hadlayo sow lugaha wajiga ka saari maysid?
Markaan baadhayay waxyaabaha uu horey usoo falay shaqsigan ayaa waxaan ugu tagay maqaal hadda ka hor lagu qoray safxadda Cabdi iley uu wax ku qoro ee la yidhaahdo Xogtashacabka oo tidhi: Doolaal Adan Dhagoole oo Sirtii ONLF Ka Gatay Dawlada Ethiopia . Siduu kaga tagay magaaladaDubai oo dalaalnimo uu ku joogay iyadana waa la ogsoonyahay, sababaha uu Hargaysa u yimid qudheeda waxaa lala xidhiidhinayaa inay ku saabsan tahay siduu isaga maslixi lahaa lacaga uu ka cunay ganacsato ree Waqooyi ah. Siduu waqtigan xaadirka ah kula joogo Cabdi iley iayadana waan ogsoonahay iyo sharaf dhaca ku haysta Jigjiga. Kollayba Cagtii Joogsan Weyda Marbay Ceeb La Kulantaa.